"Tonga tamiko ny tenin'i Jehôvah nanao hoe: Hatry ny fony hianao tsy mbola noforoniko tany an-kibo no efa fantatro; ary hatry ny fony hianao tsy mbola teraka no efa nohamasiniko sy notendreko ho mpaminany ho an'ny firenena." - Jer. 1:4,5.
Nomen'Andriamanitra hafatra fananarana hoentina amin'ny olony i Jeremia, izay manameloka azy ireo noho ny fandavana tsy ankiato ny torohevitr'Andriamanitra. Toy izao ilay hafatra: "Izaho efa niteny taminareo, eny, nifoha maraina koa Aho ka niteny, nefa tsy nihaino hianareo. Nirahiko taminareo koa ny mpaminany mpanompoko rehetra, eny, nifoha maraina koa Aho ka naniraka azy hanao hoe: Samia miala amin'ny lalanareo ratsy hianareo ankehitriny, ary ataovy tsara ny ataonareo ary aza manaraka andriamani-kafa hanompo azy, dia honina amin'ny tany izay nomeko anareo sy ny razanareo hianareo" - Jer. 35:14,15.
Nangataka azy ireo Andriamanitra mba tsy hampirehitany fahatezerany amin’ireo asan'ny tanany sy ny asan'ny fony, nefa "tsy nihaino" izy ireo. Koa naminany ny famaboana ny Jiosy i Jeremia, ho famaizana azy ireo noho ny tsy nitandremany ny tenin'i Jehovah. Ny Kaldeanina no ho fitaovana hampiasain'Andriamanitra entina hamaizana ny vahoakany tsy mety mankatò. Arakaraka ny fahalalany sy ny fampitandremana notsiratsirainy ny famaizana azy.
Nampaharetan'Andriamanitra ela ny fitsarany satria tsy tiany ny hanala baraka ny vahoaka nofidiny. Kanefa ankehitriny dia handrotsaka ny fahatezerany amin' izy ireo Izy, ho ezaka farany hampitsaharana azy ireo amin'ny lalan-dratsiny.
Tsy nametraka drafitra vaovao hitazonana ny fahadiovan'ny olony Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Mitalaho ireo maniasia izay manonona ny anarany Izy mba hibebaka ka hiala amin'ny lalan-dratsiny, tahaka ny fomba nataony fahiny ihany.
Milaza mialoha ny loza eo anoloan'izy ireo amin'ny alalan'ny vavan'ny mpanompo nofidiny Izy ankehitriny, tahaka ny tamin'izany fotoana izany ihany koa. Mampandre ny hafatra fampitandremany Izy, ka mananatra amim-pahatokiana ny mpanota, tahaka ny tamin'ny andron'i Jeremia. Kanefa ny Isiraely amin'izao androntsika izao dia alaim-panahy ihany koa hihomehy fananarana sy hankahala torohevitra tahaka izay nataon'ny Isiraely fahiny. Matetika loatra izy ireo no manentsin-tadiny amin'ny teny izay omen'Andriamanitra ny mpanompony mba hahasoa ireo izay milaza ny tenany fa manaraka ny fahamarinana.- ST, 12 Feb.1880.